I-Gauge yongezwa nguRioo kunye ne-P3D V4
umbuzo I-Gauge yongezwa nguRioo kunye ne-P3D V4
iinyanga 6 2 kwiiveki ezidlulileyo #1269 by al1191
I-Rikoo idibanisa iindiza ezithile ezichazwayo ezihambelana neP3d V4 kodwa ezenza iingxaki ngeP3d V4:
"I-CALLOUT_SOUND" ayisebenzi ngenxa yenguqulo ye-32-bit
Kufuneka ithathelwe indawo ngokuthi "dsd_p3d_xml_sound_x64!" ifunyenwe kwiwebhusayithi kaDoug Dawson
I-gauge script "HoneywellFMC_Grey_Riko!" inephutha elikhulu lenkqubo kwaye ayisebenzi.
Ndizoxolisa zonke i-English yesiNgesi "inguqulelo yeGoogle"
iinyanga 6 kwiveki 1 eyadlulayo - iinyanga 6 kwiveki 1 eyadlulayo #1271 by rikoooo
Uthetha ntoni na? U-HoneywellFMC_Grey_Riko uhambelana ngqo ne-P3Dv4 Ndiyifake le nto ngaphambili, kunye ne-Callout_Soud.dll (leyo idsd_p3d_xml_sound_x64 iqanjwe kwakhona kwi-Callout_Soud) ngokunjalo, ngaphandle kokuba ufake i-add-on engayibonakali i-Prepar3D v4 ehambelanayo. Nceda ufumane lonke uluhlu apha: www.rikoooo.com/prepar3d-v4 .
Uhlobo lokugqibela: Iinyanga ze-6 ze1 iveki edlulileyo rikoooo.
iinyanga 6 kwiveki 1 eyadlulayo #1272 by al1191
Ndandiqonda into othethile kum kodwa andiyikholelwa ukuba ndiphosakele.
Ndifake kwi PD3 V4 iindiza ezimbini (i-Beriev BE-200X kunye ne-boeing c-32) ocebisa ukukhuphela:
Ngezantsi nangenxa yendiza nganye uza kufumana uluhlu lweephutha, ezinye zilula ukulungisa abanye ababuthakathaka, ezixelwe yi-P3D V4 (ContentErrors.txt) kwaye iqela ngamafayile:
Beriev BE-200X (ndenze izilungiso kwaye ndagcina indiza)
Iingxelo ezingekho phantsi (//)
I-1: I-Jane Yonke I-Aircraft 2002-2003 Ed
I-2 ye-Ref: Yiba-200-3-umboniso
Ref 3: ii-Intanethi ezahlukeneyo
Phinda Phinda igama elingundoqo: DIFFERENTIAL_BRAKING_SCALE
Iphutha = I-C-style gauge yehlulekile ukulayisha: D: \_ Inkqubo yeefayile \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 \_ Gauges \_ CALLOUT_SOUND.dll, Gauge: isandi. I-DLL yinxalenye ye-32. I-64 yenguqulo encinci iyadingeka.Le Library ithetha (icinga) ifakwe ipakethe kwaye ibizwa ngokuba yiGauge50
Gauge RMI_SQ Ifayile yefayili yokulahleka: BE200 \_ hhRMI_compass_highlight.bmp
Phinda Phinda Igama Eliqhelekileyo Icandelo: Ifowuni05 Iqhosha: window_pos
Ifayili yesandi ekhoyo
boeing c-32 (ezininzi izilungiso zokwenza, andizange ndigcine indiza)
Phinda usebenzise igama eliphambili: gear_motor
Phindaphinda igama eliphambili: umakethi_beacon
Iphutha = I-C-style gauge yehlulekile ukulayisha: D: \_ Inkqubo yeefayile \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 \_ Gauges \_ CALLOUT_SOUND.dll, Gauge: isandi. I-DLL yinxalenye ye-32. I-64 encinci inguqulo iyadingeka. LeThala leencwadi (ndikucinga) efakwe yiphakheji kwaye ibizwa ngokuba yiGauge122, Gauge33 [VCockpit01]
Phinda Phinda Igama Eliyinhloko Icandelo: I Window08 window_pos
Gauge RMI_SQ Ifayile yefayili yokulahleka: B767 \_ hhRMI_compass_highlight.bmp
Gauge Gear_Light_L kunye neGear_Light_C kunye neGear_Light_R Ifayile yefayili yokulahleka: I-B767 \_ Gear_light_up.bmp
Gauge Multi-Function Ibonisa ifayile engafaniyo yefayile: B767 \_ MFD1_Ownship.bmp
I-FMC inempazamo engaphezulu ye-150 Iphulo efana no- [Abazali abangenalutho okanye abavaliweyo bokuvala abangazange bafumaneke] okanye [umyalelo awufunyenanga-mhlawumbi isikhala asikho okanye kukho indawo eyongezelelweyo].
Ndiyathemba ukuba olu luhlu luya kuba luncedo kuwe.
Injongo yam ayikugxeka umsebenzi oncomekayo kodwa kunokuba wenze iingxelo ezakhayo
iinyanga 6 kwiveki 1 eyadlulayo - iinyanga 6 kwiveki 1 eyadlulayo #1274 by rikoooo
Iimpazamo kwi-FMC malunga ne-BMP engekho okanye iifayile eziphindiweyo kunye nokunye akubalulekanga kwaye ziyakunakunyuswa ngokupheleleyo.
Kufuneka ukhubaze nokungena kweziphene (i-debugs) kwi-P3D ukulungiselela ngaphandle kokuba ungumprogram okanye umnqweno omkhulu malunga ne-XML gauges, ngaphandle koko, iya kuvela rhoqo xa uvala IP3D kwaye iyacaphukisa.
Yintoni enomdla apha yiphutha malunga ne-DLL eyinxalenye ye-32, akuyinto eqhelekileyo kodwa kulula kakhulu ukuyilungisa:
Yiya kwifolda "iigraji" ze-Prepar3D v4 -> (C: \_ Inkqubo yeefayile \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 \_ gauges) uze ufake indawo kwifayile ethi "CALLOUT_SOUND.i gau"kwaye uyisuse. Nangona kunjalo, musa ukususa" CALLOUT_SOUND.DLL"bangela le fayile yi-64 bits (iifayile zinamagama afanayo kodwa isandiso esahlukileyo .gau = 32bits kunye .dll = i-64 bits).
Qaphela: Ukuba "I-CALLOUT_SOUND.gau" ayikho, mane ususe "CALLOUT_SOUND.dll" kwaye ufake kwakhona i-Boeing C-32, ngoku kuya kuqinisekiswa ngokuqinisekileyo.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: al1191
Ixesha ukwenza page: 0.196 imizuzwana